Bullypit: Miyuu Bulldog Pitbull Mareykanku isku daraa nooca eygaaga? - Taranka
Haddii aad raadineyso nooc ah oo noqon kara eey waardiye ah oo cajiib ah, maxaad u yeelan la’dahay labo? Isku darka 'Bulldog Pitbull American', oo sidoo kale loo yaqaan Bullyit , waxaa laga yaabaa inay kaliya tahay canine aad raadineysay.
Noocan isweydaarsiga ahi wuxuu umuuqan karaa mid cabsi gelin kara, laakiin wey ku murjin doonaan adiga, ha ahaato sida xayawaanka guriga jooga ama inta ay u ciyaarayaan eey ilaalin ah ama ilaaliye ahaan.
Ma rabtaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Bullypit?
Waa maxay Bullypit?
Isku dhafka iyo cabsi gelinta Bulldog Pitbull American
Dabeecad: Waa maxay isku darka Pitbull Bulldog sida?
Daryeelka isku dhafka Bulldog American
Bullypits ma caafimaad qabaan?
Halkeen ka heli karaa Ey yaryar oo Bullypit ah oo iib ah?
Ma inaad ka heshaa isku-darka Bulldog Pitbull Mareykan ah?
Eeyaha nashqadeeyayaashu way jireen in muddo ah, laakiin qaar waxay dhahaan isku darka American Bulldog Pitbull ayaa laga yaabaa inuu markii ugu horreysay yimid 30-kii sano ee la soo dhaafay ama wax la mid ah.
Marka, si aad nooga caawiso inaan wax yar ka fahamno noocyadan isku dhafan oo aan ogaano waxa laga filan karo xagga muuqaalkooda iyo shakhsiyaddooda, waxaa lagama maarmaan ah in si dhow loogu fiirsado mid kasta oo ka mid ah waalidiinta saafiga ah.
Bulldogga difaaca ee Mareykanka
Nasiib darrose, noocyada cagajuglaynta badankood waxay leeyihiin taariikh qallafsan, taas oo la mid ah tan Bulldog Mareykan ah . Aabayaashan Ingiriiska ah ee canines-yada saboolka ah waxaa loo soo saaray bears iyo dibiyo ilaa illaa 1835 markii dhaqankan foosha xun laga mamnuucay.
Si kastaba ha noqotee, wali waa la xukumay maadaama mamnuucitaanku kaliya loola jeedo in diiradda loo rogay taranka eeyahaas loogu talagalay la dagaallanka eeyga.
Sababtoo ah in loo dhasho sida eeyaha dagaalka, eeyahaani waxay ahaayeen lagu dhiirrigeliyey inuu dagaal badan yahay , iyo dabeecaddooda geesinimada leh waxay Bulldog ka dhigtay mid ku habboon shaqada ay dadkaasi doonayeen.
Markii dambe eeyahaas waxaa keenay Mareykanka soogalooti, ​​iyo daacadnimadooda, dabeecad xumadooda darteed, waxaa loo dejiyay inay ka shaqeeyaan ilaalinta guryaha iyo ugaarsiga cayaaraha beeraha. Dagaalkii Labaad ee Adduunka, nooca Bulldog-ka Mareykanka wuxuu ku dhowaaday inuu dabar go'o.
Stocky iyo murqaha , American Bulldog wuxuu leeyahay karti isboorti oo heer sare ah waxaana loo yaqaanaa inuu lix cagood ama ka badan hawada u boodo. Caadi ahaan waxay istaagaan 20 illaa 28 inji (50 illaa 70cm) dhererkooduna wuxuu u dhexeeyaa 60 ilaa 120 rodol (27 illaa 54 kg).
Waxaa jira noocyo badan oo ah Bulldog Mareykan ah, oo ay ku jiraan nooca Johnson (oo sidoo kale loo yaqaan Xoogsheegasho ama Caadiga ah ), kuwaas oo waaweyn, waaweyn, oo muruqyo leh xabad ballaadhan.
Waxa kale oo jira nooc Scott ah (sidoo kale loo yaqaan Heerka ama Waxqabadka ), kaas oo leh dhismo dheereeya oo dheereeya, jilicsan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa isku-dhafka labada nooc ee kala duwan ee Bulldog-ka Mareykanka.
Termull Terrier-ka Mareykanka
Waxaa wax laga xumaado ah Termull Terrier-ka Mareykanka wuxuu leeyahay taariikh aad ugu eg tan Bulldog-ka Mareykanka. Noocan ayaa sidoo kale loo adeegsaday orso iyo dibi daaqis iyo markii dambe eey dagaal.
Sababtaas awgeed, hiddo-wadahaani wuxuu sumcad ku helay inuu khatar yahay, waana sharci darro ah inaad lahaato mid meelaha qaar, ma ahan oo keliya Mareykanka, laakiin adduunka oo dhan.
Pitbull-ka Mareykanka ayaa badanaa lagu jahwareersan yahay Mareykanka Staffordshire Terrier . Naadiga Kennel-ka Mareykanka (AKC) wuxuu eeygan u bixiyay magacan 1930-yadii si ay isugu dayaan inay u kala soocaan caarada iyo ceelkeedii hore ee dagaalka.
Natiijo ahaan, Pittie looma aqoonsan yahay AKC inuu yahay isirkeeda. Si kastaba ha noqotee, dadka badankood waxay isku raacsan yihiin inay labaduba ka duwan yihiin Staffordshire Terrier oo waxyar ka yar.
Kuwaas eeyo awood badan istaag ku dhowaad 17 illaa 19 inji (43 illaa 48 cm) oo garabka ah oo miisaankiisu u dhexeeyo 30 ilaa 85 rodol (14 illaa 38 kg). Waxay leeyihiin madax ballaaran, fidsan oo leh dhago yar, daan ballaaran, xoog leh, iyo dabo gaaban oo dhibic leh.
Koodhadhkooda gaaban, jilicsan ayaa ku kala duwan midab ahaan laakiin sida caadiga ah waxay ku yimaadaan laba nooc, oo kala ah Qulqulka Sanka Buluugga ah iyo Pitbull Sanka Cas .
Sida magaca ka muuqata, nooca buluugga ah ee sanka leh wuxuu leeyahay sanka midabka cirro leh ama midabka dhuxusha leh iyo jaakad, halka Pitbull-ka sanka cas uu leeyahay sanka casaanka leh dhogorta midabka naxaasta leh.
In kasta oo Godka Dulmiga u muuqdo mid cabsi gelinaya dadka qaar, afkiisa maadda ah iyo muuqaalkiisa dhoolacadeynta ah wuxuu ka dhigi karaa inuu u eg yahay eeygaaga oo kuu dhoola cadeynaya.
Isku darka Bulldog Pitbull guud ahaan wuxuu leeyahay jir adag leh laab ballaaran, dhabarka oo xoog leh, cagaha waaweyn, iyo lugaha muruqyada.
Waxay leeyihiin madax ballaadhan oo fidsan oo leh masar gaaban, iyo dhagaha floppy ama rosebud. Dabadoodu waxay noqon kartaa mid dheer oo cidhiidhi ah.
Si aan fikrad fiican kaaga siiyo waxa iskudhafka Bulldog Pitbull ee Mareykanku u ekaan doono, daawo muuqaalkan:
Intee ayey la egtahay isku dhafka Bulldog Pitbull ee Mareykanka?
Ka gudubka Bulldog Mareykan ah oo leh 'Pitbull Terrier American' waxay sababi doontaa a dhexdhexaad ilaa cabbir weyn eey taagan celcelis ahaan joogga 20 ilaa 24 inji (50 ilaa 60 cm) culeyskiisuna u dhexeeyo 40 iyo 80 rodol (18 iyo 36 kg).
Baaxad weyn oo ay leedahay awgeed, PitbullBulldog MA AHA in si fiican ugu habboon nolosha guriga oo wuxuu ku habboonaan lahaa nolosha beer ama, ugu yaraan, guri leh barxad weyn oo ood leh oo eygu ku dhex wareegi karo.
Koodhka isku dhafka Bulldog Pitbull ee Maraykanka
Inkasta oo jaakada isku dhafka Bulldog Pitbull ee Mareykanku ay gaaban tahay, ganaaxsan tahay, oo jilicsan tahay, haddana noocaani waa ma aha hypoallergenic sidaasna kuma fiicnaan lahayn dadka xasaasiyadda ku leh.
Nooca Pitbull, ha noqdo mid sanka buluug ama sanka cas leh, wuxuu saameyn ku yeelanayaa muuqaalka iyo midabka buluppit pup.
Iyada oo ku saleysan waalidkeed, eey Bulldog Pitbull mix puppy waxay ku imaan kartaa midabyo kala duwan sida madow, tan, casaan, jaalle, cawl, dahab, kareemo, iyo caddaan.
xigasho : Isku darka Caarada Mareykanka Bulldog
The Bulldog Pitbull-ka Mareykanka waa aad u ilaaliya eey laakiin soo bandhigi doonaa a shakhsiyadda faraxsan haddii la dhexgalay oo la tababaray markii weli eey.
Tababbarka eey Bullypit waxay bilaabi kartaa goor hore sideed usbuuc . Marka sidaas la sameeyo waxay fido-kan ka dhigeysaa inuu yeesho dabeecad wanaagsan.
U diyaar garow kal-fadhiyada tababarka ee khiyaanada leh ama adag. Sababtoo ah awooddooda, astaamaha sabir la'aanta, waxay u baahan doonaan gacan adag iyo milkiile daacad ah.
Way ku habboon tahay inaad khibrad u yeelato markaad la macaamilayso tarankaas maxaa yeelay haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad yeelato eey, Bullypit ayaa ogaan karta.
Ha iloobin in xoojinta togan ay muhiim tahay marka wax la barayo eey kasta, ha ahaato mid saafi ah ama mid isu-eg.
Isku darka American Bulldog Pitbull ayaa sidoo kale ka digtoonaan kara shisheeyaha iyo eeyaha kale. Iyadoo taas la yiraahdo, waa laga yaabaa inay leeyihiin u janjeersada gardaro , gaar ahaan xayawaannada yaryar. Taariikhda waalidkan kaniiniga ayaa sidoo kale laga yaabaa inay door ka ciyaaraan tan.
Sida la mid kasta ilaalin wanaagsan , Bullypits waxay jecel yihiin ciyo weyna ku habboonaan doonaan shaqada. Haddii laguu baro oo si sax ah wax looga qabto, waxaad ka filan kartaa saaxiib aad u macaan oo dhogorta leh oo ka soo jeeda tarankaan. Waxay sidoo kale yihiin eeyo aad u caqli badan oo jecel dareenka iyo baashaal.
Waxaad ka hubin kartaa sida caqliga leh American Pitbull fiidiyowgaan, halkaasoo mid loo tababarayo inuu fariisto, ka tago, oo uu soo kaxeeyo:
Waxyaabo yar oo ay tahay in maanka lagu hayo markay timaado lahaanshaha tarankaan - sababtoo ah jaakadooda khafiifka ah, isweydaarsigan sifiican ugama wanaagsana jawiga aad u diiran ama qabow.
Lakabkooda kaliya ee dhogorta leh ma bixiyo difaac badan xitaa waxay la macno tahay in Bulldog Pitbull uu u nugul yahay gubashada qorraxdu wuxuuna u baahan yahay inuu isticmaalo shaashadda qorraxda!
Immisa jimicsi ayey fido u baahan tahay?
Isku-dhafkan ayaa si caddaalad ah u firfircoon, iyo ugu yaraan 90 daqiiqo oo jimicsi ah maalin kasta . Socdaalku wuxuu ka caawin doonaa eygaani inuu ahaado qof dhaqan wanaagsan oo madadaalo leh.
Taasi waa sababta waxaan kula talinaynaa iyaga qoysaska firfircoon ee jecel inay banaanka ku qaataan waqti iyo qaadashada saaxiibkood canine ordaya, orodka, iyo socodka.
Kicinta maskaxda, ugaarsiga khasnadda, ama qarinta & raadinta alaabada ay jecel yihiin ama daweynta waa waxqabad weyn.
Kaliya booqo goobta loo yaqaan 'doggy park' haddii Bullypit-kaaga la tababbaray lana dhaqan galay. Waa inaad feejignaataa markaad u ogolaaneyso saxaabadaada inay la ciyaarto eeyaha kale, sidaas darteed ha uga tagin isaga oo aan ilaalin .
Quudinta Pitbull-kaaga Mareykanka
Cagajuglaynta waa in la quudiyo ugu yaraan 2 ½ ilaa 4 koob cuntada eyga maalin kasta, oo loo qaybiyo saddex illaa afar cunto. Waxay kaa caawin doontaa kahortaga torsion gaas, taas oo ah xaalad caadi ah laakiin daran oo ku jirta noocyada waaweyn.
Noocan isweydaarsigu wuxuu si weyn uga faa'iideysan doonaa cunnooyinka eyga ee qalalan oo tayo sare leh oo leh qaddar yar oo hadhuudh ah maadaama hadhuudhku sababi karo xasaasiyad Waa inuu sidoo kale ku badan yahay hilibka iyo Omega 3 asiidh dufan leh si loo horumariyo lafo adag loona adkeeyo murqaha.
Cunto hodan ku ah chondroitin ama glucosamine waa xulasho wanaagsan in lafaha xayawaankaaga la ilaaliyo iyagoo caafimaad qaba lagana fogaado wax cudur ah oo wada jir ah.
Haddii aad haysatid waqti iyo miisaaniyad aad ku quudiso cunnadaada cayriin canal, taasi wey fiicnaan lahayd, sidoo kale! Sida Benzo oo kale leh cunnadan wadata.
Kaliya iska hubi in cuntada aad siiso eeygaaga ay ku saleysan tahay da'diisa, cabirkiisa, heerka waxqabadkiisa, iyo caafimaadkiisa.
Qurxinta si fudud-neecow leh
Baahida loo qabo hagaajinta isku dhafka Bulldog Pitbull ee Mareykanka waa hooseeya ama dhexdhexaad ah . Cadayashada waxaa loo baahan yahay oo keliya qiyaastii laba jeer usbuucii - marka laga reebo xilliyada daadinta sare oo maalin kasta loo baahan yahay cadayasho.
Sii qubays keliya markii loo baahdo, sida markii uu wasakh noqdo ama urayo. Masaxista Isku darka Bulldog Pitbull iyo maro qoyan oo qoyan ayaa ku filnaan doonta in la nadiifiyo lagana saaro wixii timo dabacsan.
Ilkaha waa in la cadeeyaa laba ama seddex jeer usbuucii, halka cidiyaha la jarayo markay dheeraadaan ama ay ogaadaan inay dhulka ku xoqeen. Dhegaha sidoo kale waa la hubin karaa oo la tirtiri karaa toddobaadle.
Nooca adag ee isku dhafan ee Bulldog Mareykan ah iyo Pitbull wuxuu keenaa iskutallaab kaas oo yeelan kara cimri guud 10 ilaa 13 sano . Sidaas oo ay tahay, iskudhafyada waxay dhaxli karaan qaar ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee waalidkood ay asalka u yihiin.
Dhiggiisa Ingiriiska ee Bulldog-ka Mareykanka ayaa caan ku ah cuduro dhowr ah sida hip dysplasia, oo ku badan eeyaha lugta gaaban.
Focus on joogtaynta nidaamka jimicsiga iyo cuntada dheeriga ah ee kaa caawin doonta kahortagga tan Bullypit-kaaga.
Sababtoo ah sankooda oo yar, eeyahaaga ayaa sidoo kale kori kara Cudurka 'Brachycephaly Airway Obstructive Syndrome' , kaasoo sababi kara dhibaatooyin daran oo xagga neefsashada ah.
Dharka hal lakabka ah ee waalidka Pitbull ayaa sidoo kale ka dhigaya noocani inuu u nugul yahay xasaasiyadda.
Cudurro kale oo caan ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan isku darka 'Bulldog Pitbull American' ayaa ah hypothyroidism , cudurada wadnaha, dhibaatooyinka indhaha, iyo hindhisada oo soo noqota.
Thanks to technology, waxaad ka heli kartaa arday internetka laga heli karo! Haddii aad ka fikireyso inaad hesho Ereyga 'Bulldog Pitbull mix' eey, waxaad ka filan kartaa inay ku kala baxaan inta udhaxeysa $ 250 iyo $ 2,000 .
Qiimaha Bullypit wuxuu ku xirnaan doonaa arrimo sida goobta abuurka, caan ku ahaanshaha aqlka, khadka dhiigga ee waalidiinta, iyo helitaanka eeyaha.
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad tixgeliso celcelis ahaan kharashyada sanadlaha ah , iyo biilasha caafimaadka caadiga ah. Kharashyada caafimaad ee sanadlaha ah waxay u dhexeeyaan $ 485 ilaa $ 600. Markaa kharashyada kale waxay u badan tahay inay u dhexeeyaan $ 510 iyo $ 650 sannad kasta.
American Bulldog Pitbull isku darka breeders
Markaad raadineyso eeyahaaga Bullypit-ka ah ee saxda ah, fikir badan iyo daryeel waa inay galaan isku dayga lagu doonayo helitaanka abuure wanaagsan.
Taranka mas'uuliyad darrada ah ee 'Pitbull American' iyo American Bulldog wuxuu sababi karaa eey dagaal badan.
Iskuday inaad iska ilaaliso inaad ka iibsato isku-dhafkan dukaanka xayawaanka ama meelaha aadan hubin in dhaqanka taranka anshaxa la raacay.
Si aad u bilawdid raadintaada eey Bulldog Pitbull mix puppy, raadi breers ku takhasusay Pitbull ama isku darka Bulldog, sida Xayeysiisyada Khadka Tooska ah gudaha Memphis, TN.
Waxaad sidoo kale hubin kartaa akoonnada warbaahinta bulshada, sidan oo kale Bogga Facebook , halkaas oo aad ka heli kartid Ereyga Bulldog Pitbull ee yaryar oo iib ah. Waxa kale oo jira suuqyo bixiya isku darka Pitbull iyo isku darka American Bully.
Dabeecadda dabeecaddan awgeed, waxaad badanaa ka heli kartaa isku-dhafka Bulldog Pitbull ee Mareykanka hoyga aad qaadan karto ama aad dib u dhigan karto.
Waxay kuxirantahay waayihiisii ​​hore, samatabbixinta isweydaarsigan wuxuu ubaahan karaa waqti badan iyo u heellan xagga tababarka, dib uheshiisiinta, iyo jimicsiga. Ururada samatabbixinta qaarkood waxay qabtaan eeyo tababbaran oo la jooga, marka tani waa wax aad weydiisan karto hoyga.
Waa kuwan meelaha qaarkood oo aad ka bilaabi karto raadintaada Bulldog Pitbull si loo korsado:
Samatabbixinta Shaw Pitbull (Columbus, MS)
Xun xun (Oakland, CA)
Samatabbixinta Noocyada Caga-Caga-Ameerika (Kansas City, MO)
Samatabbixinta Fresno (Sanger, CA)
Naadiga Bulldog ee Mareykanka waxay leedahay a badbaadinta shabakadda halkaas oo ay ku qoraan liistada ururada iyo eeyaha laga qaadan karo gobol kasta.
Noocan, inkasta oo aanu ahayn xayawaanka ugu habboon ee qof walba, wuxuu muujinayaa daacadnimo adag dadka ugu jecel.
Dabeecadda ilaalinta, xoogga leh, iyo firfircoonida ee Bullypit waxay ka dhigeysaa iyaga kuwa ugu habboon ku habboon milkiilayaasha eyda firfircoon iyo kuwa khibradda leh ee diyaar u ah inay maal gashadaan waqtiga tababarka, jimicsiga, iyo is dhexgalka eygooda.
Haddii aad tahay milkiile laylis, waxaad u arki kartaa noocyadan isku dhafan inay noqdaan kuwo madax adag, gardarro leh, oo ay adag tahay in la xakameeyo.
Maxaad ka dhihi kartaa eygan naqshadeeye? Ma leedahay isku-darka Bulldog Pitbull Mareykan ah? La wadaag sheekadaada adoo ka faalloonaya hoosta!
Wax walba oo ku saabsan Malta: Maxay u yihiin eeyaha ugu fiican?
Isku darka Shepherd Boxer ee Jarmalka: Eygan daacadda ah ma kuu habboon yahay adiga?
adhijir jarmal cad oo isku darka dib u soo celinta dahabiga ah
dachshund puppy timo dheer maroon
Chihuahua jack russell Terrier isku dhafka ah
xakame pitbull shaybaarka isku darka eeyaha
Shepherd dahabka dib u soo celinta
nus dahab soo ceshano badh husky